Umzi-mveliso oKhethekileyo weZibonelelo, ababoneleli-abaVelisi abaKhethiweyo baseTshayina
Amabhakethi e-elevator, amatyathanga ekhonkco & neziqhagamshelo, amavili eChayini, iiSprockets zeChayini, amatyathanga oThutho
Amalungu e-SCIC kwizinyusi zamatsheyina kunye nabahambisi baquka: iiemele ze-elevator, amakhamandela amatsheyina kunye neziqhagamshelo, amavili ekhonkco, ii-sprockets zamatsheyini, amatyathanga okuhambisa, njl.
I-SCIC ebonelelwe ngeendawo zezinyusi zamatsheyini kunye nabahambisi ziyilwe ngokukodwa ngokweenkcazo zemizi-mveliso ezifana ne-DIN 22256, DIN 745, DIN 5699 & DIN 15234, okanye i-OEM/ODM kubathengi kwiimfuno ezithile ngokobukhulu bekhonkco elijikelezileyo/ibakala/amandla edatha, ngoko ke ukuba senze izindululo ezineenkcukacha ukusuka kwidimensional ukuya kwizisombululo zoomatshini.Ewe kunjalo, amandla anjalo asekelwe kakuhle kwi-SCIC kumava okwenziwa kwekhonkco elijikelezayo, ubunjineli kunye namava okusebenza kunye nolwazi kwiminyaka emininzi.
Isidibanisi soHlobo lweFlethi (SL)
I-AID ye-Flat Type Connector (SL) yenzelwe kwaye yenziwe kwi-DIN 22258-1 & MT/T99-1997 & PN-G-46705 imithetho kunye ne-specs, kunye nentsimbi ephezulu ye-alloy ukuhlangabezana neempawu ezipheleleyo zemishini.
I-Flat Type Connector (SL) isetyenziselwa ukudibanisa i-DIN 22252 ikhonkco elijikelezayo leekhonkco ezijikelezayo kwiindawo ezithe nkqo nezithe tye kunye namanye amatyathanga ekuhambiseni / ekuphakamiseni izicelo.
Isidibanisi soHlobo lweFlethi (SP)
I-AID Flat Type Connector (SP) yenzelwe kwaye yenziwe kwi-DIN 22258-1 & MT/T99-1997 & PN-G-46705 imithetho kunye ne-specs, kunye nentsimbi ephezulu ye-alloy ukuhlangabezana neempawu ezipheleleyo zemishini.
I-Flat Type Connector (SP) isetyenziselwa ukudibanisa i-DIN 22252 ikhonkco elijikelezayo lekhonkco elijikelezayo kwizikhundla ezithe nkqo kunye nezithe tye kunye namanye amatyathanga ekuhambiseni / ekuphakamiseni izicelo.
I-Kenter Type Connector
I-AID Kenter Type Connector yenzelwe kwaye yenziwe kwi-DIN 22258-2, kunye nentsimbi ephezulu ye-alloy ukuhlangabezana neempawu ezipheleleyo zemishini.
I-Kenter Type Connector isetyenziselwa ukudibanisa i-DIN 22252 yeekhonkco ezijikelezayo zekhonkco kunye ne-DIN 22255 ikhonkco yekhonkco yeflethi kwindawo ethe tye kuphela.
I-AID Block Type Connector yenzelwe kwaye yenziwe kwi-DIN 22258-3, kunye nentsimbi ephezulu ye-alloy ukuhlangabezana neempawu ezipheleleyo zemishini.
I-Block Type Connector isetyenziselwa ukudibanisa i-DIN 22252 ikhonkco lekhonkco elijikelezayo kunye ne-DIN 22255 ikhonkco yekhonkco yeflethi kwindawo ethe nkqo kuphela.